कोरियाका नाइट क्लबहरुमा नेपाली केटीहरु नाच्ने ? प्रश्न आफैमा दुःखदायीपूर्ण
Warning: getimagesize(article_uploaded_files/5d521puru_camara.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home4/b1soft/public_html/nepalkoreanews.com/page.php on line 154
हामीहरु सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि कोरियामा नेपालीहरुको बसाई निक्कै अप्ठ्यारो छ । भिसामा होस् या बिना भिसामा यहाँको जीवन निक्कै असहज छ । नेपालमा दलालहरुलाई आठ/ नौ लाख रकम तिरेर कोरियामा के के नै कमाउंछु भनेर आउंछन् तर जब यहांको स्थिती देख्छन् तब उनीहरु रुनु न हाँस्नु बांच्नु या मर्नुको संघारमा पुग्छन् ।
कोरियाको नेपाली समाजमा पछिल्लो पटक कागजी विवाह मार्फत थुप्रै नेपाली चेलीहरु कोरिया प्रवेश गरेको थियो । ती मध्ये कतिले नेपाल फर्कनु पर्यो, कतिले भिसा नै हाप्नु पर्यो, कतिले बिष नै खानु पर्यो यी दुःखदायी कुराहरुलाई हामीले बिर्सन सकेका छैनौं‌ । तर अहिले आएर अर्को समस्या थपिने सम्भावनाहरु देखिंदैछ । अब नेपाली चेलीहरुलाई कोरियाको रेष्टुरेन्टहरुमा काम लगाउने भनेर कोरिया पठाईने र नेपालका केही दलालहरु मिली यस किसिमको तयारीहरु भैरहेको स्रोतको जानकारी छ ।
अब के कोरियामा नेपाली चेलीहरुले आत्महत्याको प्रयास गरेको दुःखद घटनाभन्दा दुःखदायी कुरा हामीले हेर्नुपर्ने हो ? के दलालहरुद्वारा साँच्चै नै नेपाली चेलीहरुलाई यहांका नाइट क्लबहरुमा नांच्न पठाईंदैछ त ? हाल कोरियाका नाइट क्लबहरुमा प्रायः रसिया र फिलिपिन्स लगायत अन्य केही देशहरुका केटीहरु नाच्ने गर्दछन् । जसले ग्राहकहरुको माग समेत पूरा गर्नलाई जुनसुकै कामहरु पनि गर्नुपर्दछन् अरे । तर अब त्यो ठाउंमा नेपाली चेलीहरु ? प्रश्न आफै‌मा स्तब्धपूर्ण छ ।
पैसा कमिन्छ भन्दैमा जे पनि गर्न सक्ने दलालहरुले ती चेलीहरु यहाँ आएपछि कस्तो दुःख पाउंछन् भनेर किन वास्तै नगरेको होलान् ? त्यो पैसाले तपाईको तपाईको परिवारको जीवन यापनमा केही राहत त मिल्ला तर एकचोटी ती चेलीहरुको ठाउंमा तपाईहरुको आफ्नै छोरी चेलीहरुलाई राखेर हेर्नोस् न । सक्नुहुन्छ ?
सम्बन्धित ब्यक्तिहरुलाई यस्तो अमानवीय पाप नगर्न अनुरोध गर्दछु ।